Xalalka aasaasiga ah, heshiis wanaagsan - Geofumadas
Mee, 2009 tabo cusub, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, egeomates My
Mar walba waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin qalabka shirkadaha waaweyn oo aan si fiican u qaban, ka faa'iideysigaan yar yar ee ka faa'iidaysta si ay u kobciyaan xalka ay daboolayso baahida macaamiisha, sida caadiga ah waxay ahaayeen.
Haddii ay tahay ganacsi wanaagsan ama aan ahayn, qaabku waa mid xiiso leh, waxay u muuqdaan inay aadaan shirarka sanadlaha ah si kor loogu qaado wax soo saarkooda ama adeegyadooda; Waxaan xasuustaa inaan ku arkay mid ka mid ah shirarka ESRI, ee San Diego, oo ah rugta 'Sketchup!', Barnaamijkaas oo markii dambe Google ay heshay. Waxaan sidoo kale aragnay in dhowr ka mid ah shirkadahaan yar yar ay dhawaan ku dambeyn doonaan inay la wareegaan boqortooyooyinkii waaweynaa ama ay kuu iibiyaan xalka yar ee nooca soo socda u imanaya sidii kordhin cusub.
sida caadiga ah shirkadaha waawayn ha u dhow ula shaqeeyaan, in aan la waxyeelayn ganacsi oo ogaa in iyaga la dhamaystiro inkastoo xumo sida caadiga ah u bartaan mar khataraha ay saamayso ganacsigooda ama si looga fogaado khatarta in aado tartanka.
Waxaa jira kumanaan ganacsiyada noocaas ah, kuwaas oo habka ku dhaqaaqa lacag aad u tiro badan qaabkan. Xaaladdan oo kale waxaan doonayaa inaan muujiyo mid ka mid ah tusaalooyinkaas, maaddaama xiriirka wireless-ka uu yahay mid laga naxo hudheelkan duugga ah ka dib iyo ka dib xilli-roobaadka oo billowday, waxay umuuqataa in habeenku aad u dheeraan doono.
Shirkadani waxay ku taallaa New Jersey, waxay u heellan tahay ganacsi aad u gaar ah, xalalka kuwa sameeya khariidada mana rabaan inay jebiyaan qumbaha iyaga oo isticmaalaya qoraalka.
Sidaan ognahay, calaamadeynta waxaa sameeya "duurka" inta badan barnaamijyada CAD / GIS in kasta oo aysan wax badan noo saameyn doonin shaqada xafiiska, markaan qaadano khariidad u bixi doonta daabacaadda, sawir qaadaha shirkadda wuxuu soo jeedinayaa in qoraallo badan oo xun sifiican uga guur booska. Waa madax xanuun aad u xun maxaa yeelay waxaa jira kiisas xad dhaaf ah oo sida kaliya ee ay tahay in loogu beddelo qoraalka qaab muuqaal ah.
Oo markiiba hadda MapText, oo leh xalal loogu talagalay meelaynta qoraalka iyada oo aan faragalin bini-aadam ah. Waxay yihiin shaqooyin xiiso leh oo aasaasi ah sida:
Qoraalka gaaban ee muuqaal ah
Qoraalka gaaban ee qulqulka
Calaamadaynta khadadka konka
Hada waxay sidoo kale la shaqeeyaan qalabyada webka-ku-jihaysan, inkasta oo alaabadeeda alaabeed ee loo yaqaan "Label EZ" ay la shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee software-yada:
ArcGIS 8x iyo 9x
Badeecad aad u fudud, oo loogu talagalay baahida asaasiga ah ee shirkadaha soo saara khariidadaha daabacaadda, taas oo u muuqata mid fudud laakiin la fahmi karo maahan.
Shirkadda Shirkadda, wuxuu u sameeyay alaab isticmaaleyaasha Microstation iyadoo lagu saleynayo daciifnimadiisa weyn ee kuwan: daabacaadda. Ugu dambeyntiina Bentley wuxuu ka iibsaday xalkoodii iyaga oo hadda u soo bandhigaya sida CADScript iyo MAPScript aad u adag iyadoo loo marayo habka loo abuurayo qaabab wax soo saar oo aad u tayo sarreeya iyo shaqooyin aan looga maarmi karin sawir gacmeedka waagii hore (oo la daabacay sida ku qoran 2014 Cadastre)
Hadda waxay ku soo dhaweeyeen CADform, xalka si loo simo heerarka udhexeeya AutoCAD iyo Microstation iyada oo lala Altiva Software.
AxiomintKuwani waxay u heellan yihiin xalal badan oo isticmaalayaasha Microstation u baahan yihiin in kasta oo codsiyadooda ay isku dari karto Bentley, haddana waa la ixtiraamay illaa laga tixgeliyo ku dhowaad shirkad wadaag (lamaane) tan iyo markii ay sidoo kale galaan tababarka oo ay soo saaraan warside lagu magacaabo Microstation Maanta. Waxaa laga yaabaa inaan ka hadlo iyaga maalin maalmaha ka mid ah maxaa yeelay wax soo saarkoodu aad buu u badan yahay aadna wuu u qaddarinayaa dadka isticmaala Bentley, gaar ahaan hadda markay ka faa'iideysanayaan qaabka xml.
Waxay sameynayaan wax kasta, waxaad u baahan tahay inaad aragto agagaarkooda khibrad si ay u go'aamiyaan waxa aan ugu yeerayo Geofumados; Tani waa arrin shirkad ah oo isdaba-joog ah ku socotay, iyo, maadaama ay maamulaha ay ii sheegeen, waxay ku saabsanayeen inay iska iibiyaan shirkad aad u ballaaran laakiin waxay ku guuleysteen inay ka gudbaan jahwareerka ... wakhtigaas.
Waxay u sameeyaan xalal yar yar shirkadaha waawayn, ha ahaadeen Dibad-u-bixinta ama qandaraas-hoosaad caadi ah; marka la eego xalalka geospatial-ka waxaa ka mid ah ESRI, Bentley iyo Manifold. Waqtigan xaadirka ah waxay horeyba u leeyihiin wax soo saarkooda, sida Maareeyaha Dossier oo aan sanadkii la soo dhaafay oo hadda ka shaqeeya MapBox, jiiddo si ay u dhinto xididka looguma talagalin sida barnaamijka GIS cusub laakiin Handler ah loogu isticmaalo degmada xogta juqraafi in la shaqeeyaa kala cayncayn ah 8x.
ArcView Bentley Systems ESRI GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Lacagta cusub ee ka socota Mexico
Post Next 1: Acer Aspire One: codka ayaa la xirayNext »